Guur Doon Matahey?
“Guurku” muxuu yahey?
Guurku waa geedi noolaleed kadawan kaad kunooshahey iminka. Waa nidaam lagu xaliyo dhibaatooyin qof waliba goonidiisa uheystey. Waxaa ladhihi karaa waa nidaam noolaleed cusub camali ah(practical) oo ubaahan in la’ogaado wuxuu yahey kahor intaadan gudo galin. Waxa ladhihi karaa waa nidaam dowladeed aad katahey madaxweyne ama ra’isal wasaare.
Maxaad ka haysa noolasha guurka?
Marka ay guur timaado,wuxuu qof waliba rajeynaya inuu lakulmo waxyaabo badan oo maanka uu kuhayey. Waana tan keenta inaan guurka udeg-degno si’aan ugu wardoona waxaan maqalney ama akhrinay.
Fikirka noocaas ah ma muxo waayo wuxuu qofku kudhiirinaya guurka,laakinse wuxuu ubaahanyahey taxadir.
Hadaba mushkilada jirta waxaa weeya anagoo ufikirna positive ahaan (wanaag100%) oo aan marnaba xisaabta kudarsan dhanka negative(dhibkiisa) ee laxariira noolasha guurka. Waana suna Allah inaay waxwaliba leeyihiin dhib iyo dheef(negative and positive sides).
Waxa kali ah ee aan kuriyoona waa anagii oo noolal raaxo leh galney. Guri fiican iyo gabar ama nin fiican lacaweynayo. Caruur iyo noolal jano-jano kugaar ah.
Musharaxiinta oo kali ah.
Maqaalkan waxaan ugu talogalney inaan shabaabka guurdoonka siino macluumad wixii aan kudhaano si’aaney udhihin: “Masidaan baan isku ogeyn! Waa la’iqalday!Qof fiican baan umoodayey!” Adigoo waliba dacwad dhabarka kasaara dadkii kucaawiyey markaad guursanaysay!
Ama aad qaadatid mowqif adag sida adigoo kudhaarta inaadan dib dambe uguursandoonin waxaad lakulantey awgeed! Taas oo sharciyan iyo caqliyanba uqaldan.
Go’aanada noocaan waxaa ubadan gabdhaha guurkooda 1aad xumaadey walow ay jiraan rag ayagana go’aano lamid ah qaato. Qof waliba calafkiis cidi laguma eedeyn karo wuxuu Allah kuu gartey! Haddii uu guurka hore kuu guntamiwayo, guurso markale waayo waxaay ubadantahey inaad kunajexdid.
Waxaa kale oo aan kahormarinlahaa, noolasha guurka wuxuu ubaahanyahey samir iyo Alle talasaarasho run ah sida aan ugu samirno dhibaatooyinkale ee noolasha laxariiro. Guurka Somalida aad buu udhib badanyahey, gaar ahaan xiligan ay umada somaliyeed imtixaanantahey.Faro galin qabiil ayaaba laga yaba inaay qas idinku keento.Noolasha guud ahaan waxaay ka koobantahey najaax(success) oo ah inta badan iyo khasaare(failure) oo ah inta yar.
Shar utook hay(iska ilaali) kheyr waxba kama dhibee!
Saxaabada qaar kamid ayaa lasheega inuu waligiis uun nabiga weydiin jirtey sharta iyo goorta ay dhaceyso si’uu ugu badbaado.
Hadaba,waxkasta oo aad dooneysid inaad qabatid, waxaa wanaagsan inaad kafiirisaa dhanka taxadiyaadkiisa(challenge) si’aay isuwaafaqaan waxaad lakulmidoontid iyo waxaad sawiraneysid.
Marar badan waxaa dhicikarta, waxaad sawiranaysid wax kasahlan inaad lakulantid oo aad kufaraxdid, mararna wax ka adag ayaad lakulmeysa oo waxaad qaadeysa niyad jab sabobta oo ah waxaad isugu sheekeysey wax aan jirin.
Tusaale ahaan ganacsi ayaad dooneysa;waxaad sawiratey faa’ido oo kali ah maadama ay jiraan dad badan oo kufaa’idey ganacsiga adigoon fiirin kuwa yar ee ku khasaarey.
Talaabadii uhoreysey ee aad qaadeyba waxaad lakulantey khasara taas oo aadan kuxisaabtamin. Bilaa shaki inaad ganacsiga joojineysid maadama aadan lakulmin wixii aad sawiratey oo ahaa fa’ido.
Intey la’egtahey wararka aad kaheysid noolasha-guurka?
Macluumadka guurka ee aan heyno aad ayey uyartahey sababo dhowr ah awgood oo ay ugu weyntahey dhanka bulshada oo aan siin ihtimaam. Marka aad ufiirsatid baaxada uu leeyahey nidaamkan,Waxaa ladhihikara 3meelood labo meel cimriga bani’aadamka ayaa laxariirta guurka.
Haddii aad guursatey adigoo 20jir ah, waxaa lagayaaba inaad lanoolaatid lamaanahaada(spouse) inta cimrigada kadhiman.
Dabcan, mowduuca diin ahaan horey ayaa looga Hadley. Waxaan kudaraya oo kali talooyin aan isleeyahey waa laga faa’ideysandoona Insh’Allah.
Ilaha aan kuhelno wararka guurka.
Hormarka dunida ay kutilaabsadey 20sano ee ugu danbeysey awgeed ayaa waxaa batay wadooyinka lagu kala qaato wararka. Waxaa maanta sahlan wax kugu soo gaari jirey bilo ama sanado aya laga yaaba inaay kusoo gaaran wax kayar daqiiqado. Wadooyinkan sahalka ah ayuu insaanka isugu gudbiya danihiisa.
(1) Isha 1aad:Diinta
Haddii aan muslim nahey meelaha ugu muhiimsan ee aan kahelno maclumadka noolasheena oo dhami guud ahaan, gaar ahaan guurka waa Qur’aanka iyo Xadithka Nabiga S.A.Wasilim. Sidaasi darteed wararka aan heyno intooda badan waxaay naga soo gaareen dhankaas. Haddii aad ufiirsatid, diintu waxaay koobtey dhaman macluumadka uu insanka ubaahanyahey sitoos ah iyo sidadban intaba. Waxaad kaheleysa Kitaab Allah wararka wixii dhacey, waxa dhacaya ,waxa dhicidoona iyo waxaan dhicin haddii ay dhicilahaayeen sidii ay noqonlahaayeen.
Ayadaha Qur’anka kasokow, waxaa nasoo gaarey Axadith badan oo kasheekeyneysa guurka.Waxaa kamid ah kuwa sitoos kasheekeynaya fa’idadiisa iyo qaarkale iyo oo kasheekeynaya Nabiga laftiisa.S.A.Wasalim.
Tusaale ahaan, waxaad Xadith ka akhrisay Aisha iyo Nabiga S.A.Wasalim iyo dadkale oo noolal wanaagsan kusoo qaatey wada noolaanshahooda. Waxaa maskaxdaada ku soo degdegaya inaad sidaas oo kale uu guurkaada noqdo! Waaba adigii oo Nabiga matala iyo xaaskii Ca’isha matasha! Fiicnaanlaheyda haddii aay sidaasi udhici lahaayeen umuraha!
Dhankale haddii aad ka eegtid noolashadooda dhib kama marneyn. Waad Xasuusata inuu nabiga mar damcey inuu xasaskiisa oo dhan uu ooda kaqaado, mushkilad lasoo gudboonaatey awgeed.
Tusaale kale waa qisadii been abuurka(Ifkiga) ee kusaabsaneyd Ca’isha. Walow ay munaafiqiin kadanbeeyeen, hadana waxaay aheyd mushkilad soo food saartey wada noolaanshaha Nabiga S.A. Wasalim iyo Aisha.Waxaay aheyd dhibaato qarka usaartey inaay kala tagaan haddii uu Allah soo kala dhexgali laheyn.
Cashirka meesha kujiraa waxaa weeye in dadkii wanaagsana ee aan dooneyney inaan kudayano ay soo mareen dhibaatoyin xaga guurka laxariira.
Tusaale kale waa Cali iyo Faaduma,gabadhii uu dhaley Nabiga.S.A.Wasilim. Noolasha fiican ee ay kunoolaayeen kasiikow, kama marney is afgaranwaa iyo dhibaatoyin laxariira guurka. Mararka qaarkood Cali inta guriga kacarooda ayuu iska aadi jirey Masjidka markaas ayuu Nabiga S.A.Wasilim soo celin jirey.
Waxaad xasuusantahey kuwa ay yihiin dadka aan tusaalaha usoo qaadaney.Waxaad fahmi karta cid ayaga kahooseysa waxaay ku kicikarto.
Hadaba waxaa kaa horeeya waa noolal isugu jirta macaan iyo qarar laakinse ubadan macaan.
Hadaba haddii aad dooneysid inaay xaaskaada udhaqanto sidii Ca’isha oo kale,waa inaad adiga udhaqanta sida Nabiga oo kale. Waana inaad ogtahey labada dhinac ee noolashoda! Haddii aadan udhaqmikarin sidii Nabiga,hakasugin inaay udhaqanto sidii Ca’isha oo kale.
(2) Isha labad:Hollywood
Wadooyinka kale ee aan kuhelno wararka guurka waxaa kamid ah filmada gaar ahaan Hollywood. Waad lasoco isbadalka kuyimid noolasha aduunka televisionka awgiis. Qaabka noolasha shabaabka yaryar oo dhan ayaa kuxiran filmada.Waxaayna uheystaan dhamaan waxa ay jilayaan oo dhan wax run ah. Waxaay iskudayaan inaay unoolaadan, ufikiraan hadba waxaay meeshaas ku arkaan.
Sidoo kale, waxaay rabaan inuu sidaas uladhaqmo qofka ay doonayaan inuu noolasha laqeybsado haddii kale waxaay u’arkayaan qof qaldan oo ay wax sikayihiin.
Waxa filamada lamid ah qisooyinka buugagta kuqoran oo ayagana ah kuwa xaqiiqda kafog, oo qofkii akhriyaana uu isleeyahey waa taas noolasha layiri: “Halanoolaado”. Mar haddii aad sidaas ufikireysid adiga iyo noolal kala fog.
(3) Isha sedexad:Dhaqanka
Dhaqanka waa meelaha ugu badan ee aan kahelno macluumadka guurka.Qolawaliba dookheed iyo wixii ay kasoo gaartey awowyaasheed. Cidna kama fogaan karto qaab noolaleedka dadkiisa haqaldanaado ama hasaxnaado. Waayo waa waxa kali ah ee aad dhaxashey ee sidhib yar kugu soo galey.
Tusaale ahaan haddii aad dhaqanka somalida intiisa badan lama muujiyo jeceylka ninka iyo naagtiisa kadhexeeya. Sidaasi darteed, ayaa haddii la’ogaado inaay isjeceylyihiin lagu foorjeeya inaay isa sixradeen ee aaney fiyoobeen ama ay kala baqayaan.
Dhaqamada qaar baan uqalmin in laka dhaxlo. Tusaale ahaan,waxaad kusoo kortey aabaha oo hooyadaa aan magaceed ugu yeerin oo yasid darteed kudhaha: “Naaya!”
Marka uu raga usheekeynayo isagoo kuyirahdo “Tii xunta aheyd” Iyo wax lamid ah.
Waxaan kusoo korney dhaqan ay raga iyo dumarka kawada tashin noolashooda guriga. Gacan kahadalka wuxuu ahaa xalka khilaafaadka qoyska. Waxaa ladhihi karaa wuxuu ahaa noolal-guur oo intiisa badan kutiirsan qabiilka waayo naag ama nin aan cajiib-gilin qabiilka lama doonaya sikasta oo isu jeceylyihiin labadooda.
Haddii aad sidaasi ufikireysid, waxba guur ha isugu dhawaan.Waxaad kunooshahey taariikh noolaleed hore oo diyaar uma tihiin inaad lajaan qaadid nidaamka cusub ee waaqiciga ah.
(4) Isha 4aad:Waalidka.
Dad yar ayaa nasiib uyeesha oo kahelo taagero ama warbixin kusaabsan guurka waalidkood. Warbixinta noocaan ee ay waalidka ugudbinayaa carurtooda aadbay ukoobantahey.
Aabuhu waxaa lagayaaba inuu kala taliyo wiilka reerka uu kaguursanayo iyo sidii uu xaaska kuhelilahaa, isagoo intabadan taloyin xaga dhaqanka; ayadoo hooyadana siisa gabadheeda talooyin aan sidaas ugu siifogeyn tuu aabaha siiyey wiilkiisa. Waxaadna mooda inaay kala taageersanyihiin caruurtoda. Waxaad arkeysa aabahii oo faraxsan marka uu wiilkiisa aroosayo isagoon haba yaraatee muujin wax farxad ah marka gabadha la’aroosayo.
Aabayasha qaar kamid ah ayaaba kasii fogaado ayagoo rabshad kiciya maalinta udanbeysa ee arooska gabadha, isagoo codsanayo wixi lacag ah ee kagashey gabadha intii uu korinayey, isagoo dhanka kale lacag kubixiya wiilka guurkiisa.
(5) Isha 5aad:Saaxibada
Waa marag madoonta inaay saaxiba kala qaataan talooyinka iyo nidaamka noolasha oo dhan. Talooyinka ay bixiyaan saaxiba waa waxa ugu cad-cad ee kuu muuqda intadan guursan waayo kalsooni ayaad kuqabta inaad kala sheekeysatid arimaha hoose ee qalbigada kuweyn.
Tusaale ahaan haddii aad saaxiibka ama saaxibada soo booqatid guurka kadib oo aad kawareysatid noolasha cusub, wuxuu kuu sheegaya wixi uu isaga kala kulmey lamaanihiisa. Laakinse runta waxaay tahey saaxibka inta uu hayo ayaa iska yar waayo waqtiga uu reerka dhisanyahey oo yar iyo isagoon horey macluumad fiican kaheynin guurka guud ahaan. Taasi waxaay yareyneysaa qiimaha ay yeelankarto warbixinta ceynkaan ah inta la rumeysankarto ama lagu kalsoonaankaro.
Guurka waa waxa labaad ee aan tiiksaneyno markaan kasoo gudubno waxbarashada. Waa tiirka kobcinta iyo sare uqadida umada tayo ahaan iyo tiro ahaanba. Waxaad isku dayda inaad kusoo biirta bulshada adigoo kuhubeysan macluudka guurka laxariira si’aad usoo biirisid umad uwanaagsan.
Guurku waa noolal jeceyl kudhisan sidaasi awgeed shicaarkada waa inuu noqda jeceyl(love). Waa inaad jeceshahey xaaskada/ninkada, caruurta, walidka lamanahada iyo dhamaan wixii laxariiro oo dhan. Nabiga wuxuu dadka ugu jeclaa xasaskiisa iyo waalidiintood!
Jeceylka waa waxa keena inuu guurku waaro.Waa inaad kumuujisa jeceylka lamaanahada dhankasta; af iyo adinba.
Allaha naga yeelo kuwii isjeceyl ee jeceyl kuwaaro. Aamin.